ဆရာဝန် ကျူရှင်ဆရာ မုဒိမ်းကောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဆရာဝန် ကျူရှင်ဆရာ မုဒိမ်းကောင်
ဆရာဝန် ကျူရှင်ဆရာ မုဒိမ်းကောင်
Posted by လင်းဝေ on Jul 14, 2011 in Community & Society, Society & Lifestyle | 18 comments
ကျူရှင် ဆိုတာ ပညာရေးစနစ်ကို အကျိုးပြုသလား မပြုသလား ဆွေးနွေးဖို့ရာလည်း သပ်သပ်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါအပြင် ကျူရှင်ဆရာများ အကြောင်း ( သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အမူအကျင့်များ ) ကို အရင်ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဆွေးနွေးတာလည်းဆိုတော့ မိဘများ၊လူငယ်များ ဆရာဆိုပြီး ယုံမှတ်လို့ အပ်ထားရင် ပြဿနာကြီးသွားနိုင်လို့ပါ။
ဟိုးတုန်းကတော့ ကျူရှင်ဆရာဆိုသူများဟာ အမြင်ကျယ်တယ်၊ အပြောကောင်းတယ်၊ အသင်အပြရှင်းလင်းပြီး လူမှု ဆက်ဆံရေးပါကောင်းလို့ မြို့ကလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့ကြီးတွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ လူလက်ခံပြီး လူသိများပါတယ်။ လူ့သဘာဝအတိုင်း အဆိုးအကောင်းကတော့ ရောနေမှာပေါ့လေ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျူရှင်တွေက မှိုလိုပေါက်လာပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်
မသာတဲ့သူတွေက ကျူရှင်လုပ်ငန်းကို စီးပွားဖြစ် လုပ်ကြတော့ ပိုပြီး ရောကော သောကော တွေများလာတယ်ထင်ပါရဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ တောင် ကျူရှင်ဆရာ၊ ဘော်ဒါဖွင့်တဲ့သူတွေ ရှိနေပြီ။
ရန်ကုန်မှာကော နယ်မှာပါ လုပ်နေကြတာ။ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ ဘယ်သူက ပညာကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကောင် ကျောင်းတုန်းက စာကိုသေချာမတတ်တဲ့ကောင် ဘယ်လိုဘရုတ်သုက္ခစိတ်ရှိတဲ့
ကောင် လိင်ကိစ္စဘယ်လိုစံနှုန်းလွဲနေတဲ့ကောင် ဆိုတာသိနေပါတယ်။ ( စကားမစပ် သူငယ်ချင်းအရင်းထဲနှစ်ယောက်ကလည်း အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီးတက်ဖြစ်နေသေးတာ၊ တစ်ယောက်က နွဲ့ပြီးနည်းနည်းခြောက်ချင်တယ်၊ ပညာတော့ တော်တယ်၊ စည်းကမ်းနဲ့ ကြိုးစားတာကို တန်ဖိုးထားတယ်။ သူက မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာ သူ့နဲ့ဆုံရင်တော့ ဘီယာသောက်ရင်း ပညာရေးစနစ်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်လုပ်မိတာပဲ။ တစ်ကောင်ကတော့ ကဲတာလွန်လို့ ကွိုင်တောင်တက်သွားသေးတယ်၊ သူက စာလည်းမတော် စာလည်းမတတ်၊ ပညာရေးစနစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မစဉ်းစားတဲ့ကောင် တွေ့ရင်သောက်မယ် စော်အကြောင်းပြောမယ်။) ပြောချင်တာကတော့ ဆရာဆိုတာလည်း လူပဲ။ နောက် ဒီခေတ်ကြီးမှာ အလွဲတွေကများနေတော့ ဂရုထားဖို့ ထင်ရှားစွာသိစေချင်လို့ပါ။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေမကောင်းကြောင်း ပြောရတာ သိပ်တော့ မကောင်းပါဘူး။
ဒီတစ်ပါတ်ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ် စာ-၃၅ က ဆရာဝန်ကျူရှင်ဆရာက ဘော်ဒါဖွင့်ထားတယ်။ စစ်ကိုင်းမှာပါ။ သူ့ဘော်ဒါဖွင့်ထားတဲ့ဆီမှာနေတဲ့ ကျောင်းသူကောင်မလေးကို မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အမှုပါ။
မကျူးလွန်ဖြစ်သွားတာ တော်သေးတာပေါ့။ မိန်းကလေး ဘဝ မဆုံးလိုက်ဘူး။ အဲဒီဆရာဝန်ကျူရှင်ဆရာ မုဒိမ်းသမားက အသက်တောင် ၄၅နှစ်ရှိနေပြီတဲ့။ ကလေးမလေးကို နေမကောင်းဘူးဆိုပြီး အတင်းလုပ်လို့ စစ်ဆေးပေးပြီး အိမ်ပြန်ပို့မယ် ဆိုကာ လမ်းမှာ တည်းခိုခန်းကို ဝင်ပြီး ကြံတာဆိုပဲ။ အမှုဖြစ်စဉ်အကျဉ်းကတော့ အဲဒါပါပဲ။
အဲဒီဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ပြီး မိဘများ သားသမီးကို ဆရာပဲဆိုပြီး ယုံကြည်စွာမအပ်နှံဖို့။(ယောကျာင်္းလေးတွေကိုလည်း ပါတယ်။ အခြောက်ဆရာနဲ့တွေ့လို့ မန်းတူမန်းဖြစ်သွားမယ်။)
ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ဖတ်မိရင်လည်း ကလေးတို့ဂရုစိုက်ကြဖို့။ အစ်ကိုအစ်မတွေဖတ်မိရင်လည်း သတိပေးပြောပေးဖို့ပါ။ နောက်ဘယ်အရွယ်မဆိုဂရုစိုက်မိစေဖို့ပါ။
ကိုယ်အလိုမတူတဲ့ ကိစ္စကတော့ ဒီလိင်ကိစ္စမှမဟုတ် ရေသောက်တာတောင် အတင်းအကျပ်အလုပ်ခံရရင် ခံပြင်းစရာမဟုတ်လား။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို တင်ပြပြီး သတိပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ကိုလင်းဝေကျော် ရေ ။
ကလေးတွေရော မိဘတွေပါ သတိထားလို့ ရတာပေါ့ ….။
ကျောင်းသားအရွယ်က ဘာမှ မသိသေးတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ မိဘတွေ သေချာ ဂ၇ုစိုက်ဖို့လိုပါတယ် ။
ဒီခေတ်ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး .. လိင်ကွဲဆိုရင် အမျိုးအရင်းတောင် စိတ်မချရပါဘူး ..
ဒါကြောင့် harassment အကြောင်း သင်တဲ့အခါမှာ ..
ဒီအပြုအမူတွေကို အများဆုံး ကျူးလွန်သူတွေဟာ .. အနီးကပ်ဆုံး .. သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ .. အမျိုး အဆွေ .. ဆရာ .. တပည့်တွေ များပါတယ် .. ဒါကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကို အတိုင်းအတာ တခုနဲ့ပဲ ကန့်သတ်ထားဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါရဲ့ … ကျွန်မလည်း အဲ့ဒီသတင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ် ဦးလေးရေ … ။
ဆရာသာလုပ်နေတာ လူဆိုတာမျိုးကလည်း … စိတ်အမျိုးမျိုးလေ … ။ မိဘကတော့ ယုံလို့ ထားပေမဲ့ တချို့စည်းမစောင့်တဲ့လူတွေရှိတယ် … ။ ကျွန်မတို့ မိဘတွေ ခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့ဖူးတာပါ … ဆရာကို အိမ်ပင့်သင်တယ်… မကြာဘူး စာသင်တဲ့ကလေးမလေးကို မသွားတယ် … ဒါကတော်သေးတယ် ..သားမှတ်မှတ် ၊ မယားမှတ်မှတ် အတည်တကျယူဖို့ မပြေးတာ … ။
အခုဇာတ်လမ်းက တဏှာထယုံလေး ကြံတာ …. ။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ပျော်ပါးလို့ ရတဲ့နေရာတွေ များစွာရှိပါလျှက် … တဏှာပဲ စိတ်ထဲမှာရှိတော့ တထွာလောက်လေးပဲ တွေးမိပြီး နောက်ဆက်တွဲတွေ မစဉ်းစားမိတာ ဖြစ်မယ် ။
ဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ်လေးကိုတောင် မထိန်းနိုင်ဘူး
တဏှာကဖက်လာတော့ ဘာကိုမှ မတွေးနိုင်အောင်ဖြစ်ရတာပါလား .
ကျွန်မတို့ ဘော်ဒါထဲမှာလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သူငယ်ချင်းမက အတော်ချောတာ။ ၀ိုင်းအတူတူတက်တဲ့ ကောင်လေးတွေကိုတော့ တ၀ိုင်းတည်း အတူတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းမို့ မောင်နှမစိတ် ထားရမယ် ဆုံးမပြီး အဲဒီ့ဆရာနဲ့ ညားသွားရော။ စိတ်ထဲမှာ အကြည်ညိုတော်တော် ပျက်သွားတာ။
သူငယ်ချင်းမို့ မောင်နှမစိတ် ထားရမယ် ဆုံးမတာ ရှေ့ရေးမျှော်တွေပြီး ဆုံးမတာနေမှာပေ့ါ
ဟိုတလောကလည်း ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတ်သေသွားတဲ့ ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်အကြောင်း။ မူလတန်း ကလေး ကို မဖွယ်မရာ လုပ်လို့တဲ့… ။
intro တို့ ၁၀ တန်း ၀ိုင်းတက်တော့ ကြုံဖူးတယ်… အဲလိုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး… ၀ိုင်းကျူရှင်သင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပေါ့… ၀ိုင်းလာတတ်တဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို နောက်သလိုလို အတည်လိုလို စပြီး စည်းရုံးတယ်… ပြီးတော့ အပေါ်စီးကနေ ရင်သားကို ကြည့်ကြည့်နေလို့ ကောင်မလေးက ထွက်သွားရတယ်… အစကတော့ မသိပါဘူး… နောက်မှ သူနဲ့ အပြင်မှာ ပြန်တွေ့လို့ ဘာကြောင့် ထွက်တာလဲ လို့ မေးရင်းနဲ့ သူပြန်ပြောမှ သိရတာ…. ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။
ပညာရှိတိုင်း သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဆိုတာ အဲဒါကိုပြောတာ
အော်ဒုက္ခပါပဲ ဆရာတွေတော့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ.ရမ်းခံရတော့မှာပဲ.. ဒီ အသုံးမကျတဲ့ ဆရာမပီသတဲ့ကောင်ကြောင့် တော့ အဲဒီလူကို ဆရာလို.ကို အသုံးအနှုံ မပြုသင့်ဘူးလို.ထင်ပါတယ်..
ကိုယ်လဲယောင်္ကျားပါပဲ.. အဲဒီလောက်ကြီးကတော့ လွန်လွန်းပါတယ်.. လမ်းဘေးက သူတောင်းစားတောင် အဲလို စိတ်ကူးမယ်မထင်ဘူး အောက်တန်းစားပဲ.. ဆရာတွေအတွက် အရမ်းကို ထိခိုက်စေတယ်..
ရှေးယခင်မှစလို့ အခုအချိန်လောက်အထိ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး (မြန်မာပြည်တွင်နေသောနိုင်ငံသားအားလုံး) ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဆရာဆိုတာ ၊ အထူးသဖြင့်တော့ စာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆိုတာ ယုံကြည်စရာ လေးစားစရာ တန်ဘိုးထားစရာ အဖြစ် စွဲမြဲနေတာများပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ စာသင်ပေးတဲ့ဆရာတွေထဲက တချို့ကတော့ အဲဒီဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ဆီလျှော် သင့်တော်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျောင်းသားတွေရော ကျောင်းသားမိဘတွေကပါ
“ဘယ်ဆရာတော့ ယုံကြည်ရမယ်။ ဘယ်ဆရာကိုတော့ သတိထားရမယ်” ရယ်လို့
အနှုတ်တွေချည်းပါလား … ။ ဒီကျူရှင်ဆရာရဲ့ ဆွေမျိုး ၊သူငယ်ချင်းထဲက လာလုပ်တာဖြရမယ် … ။အပြောမခံနိုင်လျှင် ဘာလို့ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်လုပ်လဲ … ။ ရွံဖို့ ကောင်းတယ် … ထွီ
ဒီဆရာကြောင့် တခြားဆရာတွေပါ နံမည်ပျက်ရတယ်။ ဆရာ လို့တောင်မခေါ်ထိုက်ပါဘူး။
ဆရာ ရယ် လို့ ဖြစ်လာရင် တော့ တပည့်တွေကောင်းဖို့ တွက် အနစ်နာခံကြရမှာပါ။ခုတော့ သူ ကကြောင်သူတော်ကြီး။ရွံပေါ့. ထွီ တရားစွဲထောင်ချ ထားရမှာ. ထိုက်သင့်တဲ့အပြစ်မပေးကြဘူးလား